सशस्त्रका विवादित पूर्वडीआईजी सिंहको प्रेमिका लफडा सार्वजनिक, सबै खर्च टारिदिएर 'चुम्बनलीला' !
ARCHIVE » सशस्त्रका विवादित पूर्वडीआईजी सिंहको प्रेमिका लफडा सार्वजनिक, सबै खर्च टारिदिएर 'चुम्बनलीला' !
डीआईजी सिंहलाई कहिले काका त कहिले मामा भनेर बोलाउने उक्त युवतीले प्रहरी जवानहरुलाई गालीगलौज गरेर सताउने गरेको अहिले सार्वजनिक भएको हो । उक्त वाहिनीमा कार्यरत तल्लो श्रेणीका प्रहरीहरुलाई काम लगाउने, नमाने गालीगलौज गर्ने गरेको पत्ता लागेको हो । उक्त महिलालाई उनले आफ्नो प्रेमिका बनाएर राखेको त्यहाँ कार्यरत प्रहरी जवानहरुले बताएका छन् । ती महिलाको सबै खर्च डीआईजी सिंहले नै टारिदिएको र उनलाई हिँडडुलका लागि सरकारी गाडीसमेत उपलब्ध गराएको पनि खुलासा भएको छ । डीआईजी सिंहको परिवार र आफन्त आउँदा भने सिंहले ती महिलालाई वाहिनी कार्यालयभन्दा बाहिर लिइएको कोठामा राख्ने गरेको पनि पाइएको छ । उनीहरु दुई जना सँगै हिँड्दा अंकमाल गर्ने चुम्बन गर्नेजस्ता व्यवहार गर्ने गरेको समेत थाहा भएको छ ।